I-attic flat yokuphumla kunye nohambo lwezoshishino - I-Airbnb
I-attic flat yokuphumla kunye nohambo lwezoshishino
Černá u Bohdanče, Pardubický kraj, Czechia
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguKateřina
Indlu enamagumbi amabini okulala kufuphi nechibi iVelká Černá kunye neMělice ilungele ukuqubha. Unomgangatho ophezulu wonke, owahlulwe ngomnyango onokutshixwa, ngoko kukho ubumfihlo obupheleleyo. I-air conditioning entsha efakwe. Emva kwesivumelwano, ukubakho kokugcina iibhayisekile kumhlaba ophantsi kophahla. Amacebiso amaninzi ohambo akhoyo.
I-Černá u Bohdanče apho le ndawo ikhoyo yindawo yokuphumla ezolileyo ekufikeleleni lula kwizithuthi zikawonke-wonke ukuya ePardubice. Le ndawo ilungele abo bafuna ukuphumla ekuxakekeni kwesixeko, bafuna ukuhamba kwindalo (kukho amahlathi, amachibi kunye neekhilomitha ezi-2 ezikude kwidolophu ye-spa yase-Spa Bohdaneč, apho ungasebenzisa khona iinkqubo zokuphilisa okanye uhlale kwindawo yokuphumla. ityuwa umqolomba) kunye okanye kwelinye icala ukwazi isixeko Pardubice, apho uya kufika ukuba zokumisa phambi kwendlu kwimizuzu engama-20. I-Pardubice inikezela ngemidlalo emininzi kunye nemicimbi yenkcubeko. Ingaba i-Aquapark, ipaki yezemidlalo e-Špica eya kuxabiswa ngokukodwa ngabantwana kunye nabadlali, kodwa ifanelekile ukuhamba ecaleni komlambo, iVelká Pardubická, iZlatá Přilba, uMthendeleko weWayini kwi-chateau, Pardubický pivovar Pernštejn, Zelená brána , yentenetya ngamazwe okanye chess tumente, lonke ulwazi inokufumaneka ekhoyo kunye nathi. Enye ingcebiso kungekuphela nje kuhambo lwentsapho luhambo lwesikhephe iArnošt emlanjeni - ungafumana ishedyuli yokuhamba ngeenqanawa kunye nathi okanye uhambo oluya eKunětická Hora ukusuka apho kukho umbono wePardubice kunye neendawo ezingqongileyo kunye nevenkile yokutyela enendawo yokudlala kunye mini zoo simahla. Kwakhona kunokwenzeka ukukhwela amahashe okanye ukunambitha okukhethekileyo ngokuthe ngqo kwi-grill yangaphandle. Siya kukuvuyela ukucebisa iindawo zokutyela, iigalari kunye nezinye iindawo ezifanele ukubonwa. Ungafumana imihla ethile kwigalari.
I-Černá u Bohdanče yindawo ezolileyo apho ungaphumla khona kwisiphithiphithi sesixeko kwaye usenalo ithuba lokuya kwindawo ye-pub elunxwemeni lwechibi kwaye kukho indawo yokudlala ene-mini cyclocross track malunga nemizuzu emi-3. hamba. Ndincoma ngokukodwa ukuhamba emahlathini, ukujikeleza echibini okanye kwidolophu ekude ye-2km yaseLázně Bohdaneč, apho uya kufumana ezinye izinto ezifana ne-confectioneries, iindawo zokutyela, ii-spas ezinonyango, indawo yokudada okanye umqolomba wetyuwa. Ibhasi ephantse ibe yi-100,000 iqhuba iyure nganye nge-16 CZK. Esi sixeko sibonelela ngezinto ezininzi ezinje ngethiyetha, iicinema, iindawo zokuthenga, iindawo zokutyela ezininzi (singacebisa enye ngokokuthanda kwakho) kunye negalari. Kukwakho nenqaba entle apho iziganeko ezahlukeneyo zenzeka unyaka wonke, njengemibhiyozo yewayini. Unokunyuka izinyuko ukuya kwisango eliluhlaza apho kukho umbono omangalisayo wesixeko sonke. Kwiinyanga zasehlotyeni, ndingaphinda ndicebise ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa i-Arnošt, eyenza uhambo lweyure ukuya kweyesithathu ukujikeleza indawo kunye nethuba lokuphumla okanye iinkqubo ezinje ngokungcamla iwayini kunye nezinye iinkqubo xa zikhutshiwe.
Ukuba unomdla okanye unemibuzo, zive ukhululekile ukuthumela umyalezo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Černá u Bohdanče